फ्लाउन्डर चिसो पानीको माछा हो - BikeHike
घर » विविध » फ्लाउन्डर चिसो पानीको माछा हो
फ्लाउन्डर चिसो पानी हो?
खाने चिसो पानीको माछा के हो?
चिसो पानीको माछालाई के मानिन्छ?
फ्लाउन्डर कस्तो प्रकारको माछा हो?
फ्लाउन्डरलाई कस्तो तापक्रम मन पर्छ?
चिसो मौसम जस्तै फ्लाउन्डर?
Flounder एक राम्रो माछा खान को लागी हो?
चार माछा के हो जुन कहिले पनि नखानुहोस्?
चिसो पानीको माछा र तातो पानीको माछामा के फरक छ?
तातो पानीमा कुन माछा बाँच्न सक्छ?
तातो पानी माछा के हो?
सबैभन्दा सफा माछा के हो?
फ्लाउन्डर हलिबट हो?
कुन राम्रो कोड वा फ्लाउन्डर हो?
सोल र फ्लाउन्डर बीच के भिन्नता छ?
जाडोमा फ्लाउन्डर कहाँ जान्छन्?
फ्लाउन्डर समात्न सबैभन्दा राम्रो ठाउँ कहाँ छ?
फ्लाउन्डर कहाँ बस्छन्?
जाडोमा माछा मार्नु राम्रो हो?
के तपाईं जाडोमा फ्लाउन्डरको लागि माछा मार्न सक्नुहुन्छ?
गर्मी र जाडो फ्लाउन्डर बीच के भिन्नता छ?
फ्लाउन्डर नाजुक छ?
के हरेक दिन फ्लाउन्डर खानु ठीक छ?
फ्लाउन्डरका फाइदाहरू के हुन्?
केही पूर्वी तटीय नुनपानी एङ्गलरहरू जाडो फ्लाउन्डरको खोजीमा मार्चको हिउँदको हावालाई साहसी बनाउँदैछन्, चिसो पानीको प्रजाति जसको पश्चिमी लङ आइल्याण्ड साउन्डमा देखा पर्दछ अक्सर सेन्ट प्याट्रिक डे नजिकै हुन्छ।
जाडो फ्लाउन्डरहरू सर्वोच्च चिसो पानीको माछा हुन्। वास्तवमा, तिनीहरू चिसो पानीमा मात्रै फल्दैनन्, यो माछा चिसो पानीमा पनि उम्रन्छ, जब पानी सामान्यतया हिउँद र वसन्तमा बरफ चिसो हुन्छ, उत्तरी क्यारोलिनामा डिसेम्बरको सुरुमा र सेन्ट लुइसको खाडीमा जूनको अन्त्यसम्म।
अँध्यारो, चिसो पानीमा बस्ने माछामा ओमेगा ३ को मात्रा बढी हुन्छ। साल्मन, सार्डिन, इन्द्रेणी ट्राउट, एन्कोभिज, बास, हेरिङ र टुना ओमेगा ३ फ्याटी एसिडका धनी स्रोत हुन्।
चिसो पानीको माछामा सामन, टुना, म्याकरेल, हेरिंग, ट्राउट, एन्कोभिज र अन्य प्रजातिहरू समावेश छन्। किंग म्याकरेल, टाइलफिस, स्वोर्डफिस, बिग्ये टुना र शार्क पारामा उच्चतम छन्, एफडीए चेतावनी दिन्छ।
फ्लाउन्डरहरू फ्ल्याटफिश प्रजातिहरूको समूह हो। तिनीहरू डेमर्सल माछा हुन्, संसारभरका महासागरहरूको फेदमा पाइन्छ; केही प्रजातिहरू मुहानहरूमा पनि प्रवेश गर्नेछन्।
फ्लाउन्डरका सबै प्रजातिहरू समात्नको लागि उत्तम पानीको तापक्रम सामान्यतया 55-68ºF को बीचमा हुन्छ, यद्यपि एट्लान्टिक, प्यासिफिक, र संयुक्त राज्य अमेरिकाको दक्षिणी पानीको फ्लाउन्डर बीचको पानीको तापक्रम प्राथमिकताहरूमा केही उल्लेखनीय भिन्नताहरू छन्।
स्पेक्ल्ड ट्राउट, रेडफिश र फ्लाउन्डर - मुख्य तटीय प्रजातिहरू - चिसो मौसम जस्तै। यद्यपि, एक पटक मौसम धेरै चिसो भएपछि, यी माछाहरूको स्ट्राइक क्षेत्रहरू संकुचित हुन्छन्।
पोषण तथ्य र स्वास्थ्य लाभहरू। महासागर र समुद्रको तल पाइने, प्यासिफिक फ्लाउन्डर बेलुकाको खानाको लागि उत्कृष्ट माछा हो किनभने यसले अद्भुत स्वाद प्रदान गर्दछ र यो स्वस्थ छ।
"खान नगर्नुहोस्" सूची बनाउनमा राजा म्याकरेल, शार्क, स्वोर्डफिस र टाइलफिस छन्। पाराको स्तर बढेको कारण सबै माछा सल्लाहहरूलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ। यो विशेष गरी साना बालबालिका, गर्भवती वा स्तनपान गराउने महिला र वृद्ध वयस्कहरू जस्ता कमजोर जनसंख्याका लागि महत्त्वपूर्ण छ।
तातो पानीको माछा नदी, खोला, ताल र समुद्रमा पाइन्छ। चिसो पानीको माछा प्रायः समुद्रमा पाइन्छ। चिसो पानीको माछा ताल र नदीहरूमा पनि पाइन्छ तर सामान्यतया धेरै चिसो वातावरणमा र न्यानो पानीको माछा जत्तिकै उथले पानीमा पाइँदैन।
तातो पानीको अवस्थामा फस्टाउने माछाहरू प्राय जसो पोखरी मालिकहरूको दिमागमा आउँछन्। यी लार्जमाउथ बास, क्याटफिस, ब्लूगिल वा सनफिश, र क्रेपीहरू हुनेछन्। यी माछाहरू सामान्यतया अमेरिकाको अधिकांश भागमा कडा हुन्छन् र उत्तरमा जाडोमा बाँच्न सक्छन्।
ओरेगनमा, "तातो पानीको माछा" भन्नाले लार्जमाउथ र स्मॉलमाउथ बास, सनफिस, क्रैपी, च्यानल क्याटफिस, बुलहेड्स, येलो पर्च, वालेय र हाइब्रिड बासलाई जनाउँछ। कुनै पनि (सम्भवतः सेक्रामेन्टो पर्च बाहेक) ओरेगनको मूल निवासी होइन, तर धेरै जसो 19 औं शताब्दीको अन्त्य वा 20 औं शताब्दीको सुरुदेखि नै उपस्थित छन्।
वाइल्ड-कच अलास्का साल्मन (क्यान्ड सहित) सार्डिन, प्यासिफिक (जंगली-पक्रिएको) इन्द्रेणी ट्राउट (र केही प्रकारका ताल) हेरिङ खानका लागि सबैभन्दा स्वस्थ माछाहरू मध्ये 5। ब्लूफिन टुना। सुन्तला रफ। साल्मन (एटलान्टिक, कलममा खेती गरिएको) माही-माही (कोस्टारिका, ग्वाटेमाला र पेरु)।
यो सुन्दा अनौठो लाग्छ, हलिबुट फ्लाउन्डर हो। फ्लाउन्डर टर्बोट, सोल, प्लेस, र थप सहित सम्पूर्ण फ्ल्याटफिश परिवारको लागि सामान्य नाम हो। हलिबुट त्यो परिवारको हिस्सा हो।
फ्लाउन्डरसँग धेरै नाजुक बनावट र हल्का, थोरै मीठो फ्लाउन्डर स्वाद छ। यसको नाजुक बनावटको कारण, फ्लाउन्डर फिलेटहरू शुरुवातका लागि पकाउन अलि बढी चुनौतीपूर्ण हुन्छन्। फ्लाउन्डर, कोडले थोरै फाइदा लिन्छ किनभने फ्लाउन्डर फिलेटहरू भन्दा कोड फिललेटहरू कसरी पकाउने भनेर सिक्न सजिलो छ।
"सोल" शब्दले विशेष गरी सोलेइडे परिवारको माछालाई Pleuronectiformes क्रममा बुझाउँछ। यसले 30 जेनेरा र माछाका 130 परिवारहरूलाई प्रतिनिधित्व गर्दछ। "फ्लाउन्डर" शब्दले Achiropsettidae, Pleuronectidae, Paralichthyidae र Bothidae परिवारका माछालाई जनाउँछ।
शीतकालीन फ्लाउन्डरहरू जाडोमा अपतटीय क्षेत्रहरूबाट नजिकको पानीमा बसाइँ सर्छन्, जहाँ तिनीहरूको नाम हुन्छ।
हामीले उल्लेख गरिसकेका छौं, डकहरू, पियरहरू, चट्टानहरू र पिलिंगहरू सबै प्रमुख क्षेत्रहरू हुन् जहाँ फ्लाउन्डर (फ्लुक) ले शिकार राख्न र आक्रमण गर्न मन पराउँछन्। तिनीहरूले धेरै माछाहरू समात्न सक्छन् र डल्फिन, शार्क र ठूला माछाहरू जस्ता शिकारीहरूबाट सुरक्षा प्रदान गर्न सक्छन्।
तिनीहरू कहाँ बस्छन्? फ्लाउन्डर नुनिलो पानीको माछा हो जुन सामान्यतया किनारको छेउमा, पूर्वी समुन्द्र किनारमा, साथै मुहान, खाडी र नदीहरूमा पाइन्छ। जाडोमा, तिनीहरू समुद्रमा बसाइँ सर्छन् र सामान्यतया वसन्तको समय सम्म उथले पानीमा फर्किदैनन्।
जाडो फ्लाउन्डरको लागि माछा मार्नु वसन्त र गर्मी महिनाहरू जस्तै उत्पादक हुन सक्छ जबसम्म तपाईंको समय र स्थान सही छ। जाडो फ्लाउन्डरको लागि फैलाउने मौसम हो, र तपाईंले यस समयमा तिनीहरूलाई समात्न अपतटीय जानुपर्ने हुन सक्छ। शीतकालीन फ्लाउन्डर माछा मार्ने क्रममा तपाईलाई तल लंगर लगाउन आवश्यक हुन्छ।
हो, तपाईं जाडो महिनाहरूमा फ्लाउन्डर समात्न सक्नुहुन्छ तर तपाईंले तिनीहरूलाई अपतटीय वा किनारको वरपरको संरचनालाई लक्षित गर्नुपर्नेछ। फ्लाउन्डर जाडोमा मेक्सिकोको खाडी र एट्लान्टिक महासागरमा जान्छ ताकि तपाईंले चिसो महिनाहरूमा तिनीहरूलाई फेला पार्न अपतटीय 30 वा 40 माइल जानुपर्ने हुन सक्छ।
सजिलो: शीतकालीन फ्लाउन्डर समर फ्लाउन्डर भन्दा गाढा हुन्छ। तिनीहरू लगभग कालो देखिन सक्छन् - त्यसैले तिनीहरूको उपनाम, "ब्ल्याकब्याक"। समर फ्लाउन्डर हल्का खैरो र क्रीम वा सेतो दागहरू छन्। फ्लाउन्डरहरू तिनीहरूको वरपर मिलाउन रङ परिवर्तन गर्न सक्षम छन्, यद्यपि, तिनीहरूका अनुहारहरू तिनीहरूलाई छुट्याउनको लागि सबैभन्दा पक्का तरिका हो।
फ्लाउन्डरको बनावट हल्का र नाजुक छ, र तिनीहरूको स्वाद हल्का छ, अलिकति मीठो स्वादको साथ, यसलाई विभिन्न रूपहरूमा प्रयोग गर्न सजिलो बनाउँछ। यो बेक, ब्रोइल, साउटे र फ्राइ फ्लाउन्डरको लागि सबैभन्दा लोकप्रिय छ।
फ्लाउन्डर/सोल - हप्तामा एक पटक।
जब तपाइँ फ्लाउन्डर खानुहुन्छ, तपाइँ बहुमूल्य पोषक तत्व र स्वास्थ्य लाभहरू प्राप्त गर्दै हुनुहुन्छ। सबैभन्दा पहिले, यो एक कम-फ्याट, कम-क्यालोरी माछा हो जसले वजन कम गर्न कोशिस गर्ने मानिसहरूको लागि प्रोटीनको स्रोतको रूपमा राम्रोसँग काम गर्दछ। तिनीहरूले तपाईंलाई बी भिटामिन, फस्फोरस र म्याग्नेसियमको राम्रो आपूर्ति पनि दिन्छ।
चिसो पानी माछा के हो
राम्रो चिसो पानी माछा के हो
चिसो पानीको माछा के खाने?
द्रुत उत्तर: चिसो पानीको माछा सँगै बाँच्न सक्छ
चिसो पानीमा के माछा बाँच्न सक्छ
Anchovies चिसो पानी माछा हो
द्रुत उत्तर: Axolorls चिसो पानी माछा हो
Cichlids चिसो पानी माछा हो
प्रश्न: भ्यागुता चिसो पानी माछा हो?
द्रुत उत्तर: नियोन्स चिसो पानी माछा हो
द्रुत उत्तर: ओस्करहरू चिसो पानीको माछा हुन्
अघिल्लो पोस्ट: प्रश्न: बेटा माछाको पानी कति न्यानो हुनु आवश्यक छ